Isisekelo se-Keypad base Amamitha Amathathu Esigaba esikhokhelwa kwangaphambili i-LY-SM350
Imitha Eqondisiwe Yesigaba Esithathu (i-CTVT Esebenzayo) LY -...
I-Smart Three Phase Indirect Meter (CT Esebenzayo) LY-SM ...
I-DIN-Rail Smart single Phase Imitha Ekhokhelwa Imitha LY-SM120
I-Smart Keypad single Phase Imitha Ekhokhelwa Imitha LY-SM150
Imitha Yesigaba Esisodwa ene-Bi-Directional Measurement LY-BM12
Amamitha we-LY-BM12 amamitha amamitha wesigaba esisodwa asebenza imali, asebenza kumakhasimende wokuhlala nakumaphrojekthi we-metering angaphansi. Baqondile futhi bavikelwe kahle imisebenzi yokulwa nokonakaliswa, efanelekile ukuqoqwa kwemali engenayo ephansi nezisombululo zokuzivikela.
Amamitha we-LY-BM12 aklanyelwe ngesakhiwo esiguquguqukayo esinikeza izinketho eziningana ngokuya ngemakethe nezidingo zamakhasimende.
Isigaba Esisodwa ANSI Meter LY-ANSI11
Uchungechunge lwe-LY-AS luyimitha engabizi kagesi yesigaba esisodwa yokuhlinzeka ngezinsizakalo ngezinga eliphakeme lokunemba nokwethenjwa.
Amamitha wechungechunge we-LY-AS aklanyelwe ngokuphelele ahambisana namazinga we-ANSI, kanye ne-portfolio yezokuxhumana ye-RS485 eyakhelwe ngaphakathi ukusekela izinhlelo zokusebenza ze-AMR.
Imitha Elingashintshashintshi Yesigaba Esisodwa LY-BM13
Amamitha we-LY-BM13 amamitha amamitha wesigaba esijwayelekile asebenzayo, asebenza kumakhasimende wokuhlala nakumaphrojekthi we-metering angaphansi. Baqondile futhi bavikelwe kahle imisebenzi yokulwa nokonakaliswa, efanelekile ukuqoqwa kwemali engenayo ephansi nezisombululo zokuzivikela.
Amamitha we-LY-BM13 aklanyelwe ngesakhiwo esiguquguqukayo esinikeza izinketho eziningana ngokuya ngemakethe nezidingo zamakhasimende.
I-BS Keypad Isigaba Esisodwa esikhokhelwa Imitha LY-KP12B
Amamitha we-LY-KP12B amamitha kagesi avunyelwe ukukhokhelwa kokukokhelwa nge-BS ukuhlangana kanye / noma izinketho zohlobo oluhlukanisayo, anikezela ngezinsizakalo ngezinga eliphakeme lokunemba nokwethenjwa, okuvumela ukuxhumana okukodwa kwesigaba.
Amamitha we-LY-KP12B aklanyelwe ngokususelwa ku-20-bit Token ngokuya ngokucaciswa kwe-STS, ahambisana ngokuphelele namazinga we-IEC futhi aqinisekisiwe nezitifiketi ze-STS nezakwaSABS. Ukusebenza kwabo okungahambisani nokuncipha kanye nokulungiselela ngaphambi kwesikhathi kubenza babe ngamadivayisi aphansi kakhulu wokuqongelela imali kanye nekhambi lokuvikela.
Imitha Yesigaba Esisodwa ene-Active Energy Measurement LY-BM11
Imitha ye-LY-BM11 iyimitha esebenzayo yesigaba esisodwa engabizi kakhulu, isebenza kumakhasimende wokuhlala namaphrojekthi we-metering angaphansi. Iqondile futhi igadwe kahle ngemisebenzi yokulwa nokonakaliswa, ilungele ukuqoqwa kwemali engenayo ephansi nezixazululo zokuvikela.
Imitha ye-LY-BM11 yakhelwe kusakhiwo esiguquguqukayo esinikeza izinketho eziningana ngokuya ngemakethe nezidingo zamakhasimende.
Single Isigaba Electric Imitha , Single Isigaba Smart Energy Imitha , single Phase Prepaid Meter , Single Isigaba uThowu Imitha , Single Isigaba esikhokhelwa Energy Imitha , Single Isigaba Imitha ,